ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဘယ်လိုပြောမလဲ - Myanmar Network
Posted by Soe Soe Win on February 20, 2015 at 16:44 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” “ကျေးဇူးပြုပြီးတော့”ဆိုတဲ့ စကားတွေက ဘာသာစကားတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့မှုကို စကားအရာမှာလည်းဖေါ်ပြကြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နေ့စဉ်သုံး ပြောစကားတွေမှာ မပါ မပြီးသလောက်ပါဘဲ။ အင်္ဂလိပ်မှာလည်းဘဲ “Please” နှင့် “Thank you” တို့ဟာ မပါရင် မပြီးတဲ့ အရေးကြီးစကား ၂ ခွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောရင် ဒီနှစ်ခွန်းက တစ်နေရာရာမှာ အမြဲပါတာပါဘဲ။ Thanks တို့ Thank you တို့ ကတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်အပေါ် ပြုမူ၊ လုပ်ကိုင်၊ ပြောဆိုတာကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ရင် သုံးတဲ့ common အဖြစ်ဆုံး နှစ်ခွန်းပါဘဲ။ Thank you ကိုတော့ ပိုပြီးယဉ်ကျေးတဲ့ ပုံစံနဲ့ ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတဲ့ စကားတွေကတော့
Thank you so much တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအပေါ်မှာ ပြောခဲ့တာတွေကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးလေးနဲ့ ပြောတဲ့အခါ သုံးရပါတယ်။ ဥပမာလေးတွေကိုလည်းဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
ခင်မင်တဲ့သူ အချင်းချင်းသုံးတဲ့ ကျေးဇူးတင်စကား တစ်ခွန်းလည်းရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ “Thanksabunch” ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားကို ငေါ့ပြောတဲ့ ပုံစံနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါသေးတယ်။ ဆိုလိုတာက တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ လုပ်ရပ်က အကူအညီမဖြစ်တဲ့ အပြင် အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါ စိတ်တိုပြီး ငေါ့ပြောတာမျိုးကိုပြောတာပါ။ (Thanksalot နှင့် Thanks very much တို့ကိုလည်း ငေ့ါပြောတဲ့အခါ သုံးလို့ရပါတယ်။)
You told Tony what I told you in confidence? Thanksabunch! (ကိုယ်ကတိတ်တဆိတ် ရင်ဖွင့်ထားတဲ့ ကိစ္စကို လူတကာလျှောက်ပြောလို့ စိတ်ဆိုးပြီး "ကျေးဇူးဘဲဟေ"့ လို့ ငေါ့ပြောတာပေါ့)
Thanksalot for spoiling my evening. (ငါ့ ညနေခင်းလေး ဖျက်စီးပစ်လိုက်လို့ ကျေးဇူးဘဲ လို့ငေါ့ပြောတာ)
ကောင်းဘွိုင်ရုပ်ရှင်တွေမှာ အများဆုံးကြားရတဲ့ အရမ်းယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးလေးပြောတဲ့ ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့ နောက်စကားတစ်ခွန်းကတော့ “much obliged” ပါဘဲ။ ဒီစကားက နေ့စဉ်သုံးတွေထဲမှာ ကြားရခဲပါတယ်။ အရမ်းယဉ်ကျေးတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေမှာ သုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ရုပ်ရှင်တွေမှာ သတိထားနားထောင်ကြည့်ရင် ကြားရတတ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ခပ်မိုက်မိုက်လေး ကျေးဇူးတင်ကြောင်း Thank you နဲ့ တွဲပြောလို့ ရတဲ့ စကားတွေကတော့
I owe you one နှင့်
I owe you big time တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့် ကိုယ်က အခက်အခဲတွေ့နေချိန်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကူညီတယ်ဆိုရင် အထက်ပါ စကားတွေကို thank you အပြင် ထပ်ပေါင်းပြီး ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလို့ရပါတယ်။ ခင်မင်တဲ့ ပုံစံနဲ့ပေါ့။
Thanks for giving mealift to the station. You saved my life. (ဘူတာရုံကို ကားကြုံလိုက်ပို့လို့ ကျေးဇူးဘဲနော်။ ခင်ဗျားကယ်ပေလို့ဘဲ။)
Thanks for the advice. I owe you one. (အကြံပေးတာကျေးဇူးဘဲဟေ့။ ခင်ဗျားကိုတော့ အကြွေးတင်သွားပြီ။)
Thanks for helping me out with the essay. I owe you big time. (စာဝိုင်းလုပ်ပေးတာကျေးဇူးဘဲ။ ပြန်ကူညီဖို့ အကြွေးမှတ်ထားပါ့မယ်။)
နောက်တစ်မျိုးကတော့ ဗြိတိသျှအင်္ဂလိပ်မှာ သုံးတဲ့ ကျေးဇူးတင်စကား “Cheers” ပါ။ တစ်ချို့က စာအရေးအသားတွေမှာ thank you အစားမှားယွင်းသုံးစွဲကြပါတယ်။ "Cheers" က အပြောမှာဘဲ သုံးလို့ရတယ်။ လူတော်တော်များများက သိပ်ကြားဖူးကြမှာ မဟုတ်လောက်ဖူး။
Here’s that book you wanted to borrow.’ ‘Oh, cheers.‘
တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုလက်ဆောင်ပေးတယ် (အထူးသဖြင့် တန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင်) ဆိုရင် ပြီးတော့ ကိုယ်က အရမ်းအံ့သြသွားတယ်ဆိုရင် ပြောတာကတော့ “You shouldn’t (have)” တဲ့။
Oh, Martin, what lovely flowers. You shouldn’t have! (အိုးမဟုတ်တာဘဲ)
ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတဲ့နောက်တစ်မျိုးကတော့ “You are too kind” ပါဘဲ။ ဒါကတော့ တစ်ကယ် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတာရော၊ စိတ်ထဲကမပါဘဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောတာပါ နှစ်မျိုးစလုံးမှာသုံးတယ်။ (ပြောသူနဲ့ ပြောတဲ့ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပါတယ်။)
နောက်တစ်မျိုးကတော့ စင်မြင့်ပေါ်မှာ၊ ပရိဿတ်အရှေ့မှာ ပြောတဲ့ ကျေးဇူးတင် ပြောစကားပါ။ (ဥပမာ - ဆုပေးပွဲလိုဟာမျိုးမှာ) အဲ့ဒါကတော့ “I’d like to thank…” ပါ။
I’d like to thank everyone for coming along and supporting us today. (I'd like to thank..အနောက်မှာ ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့ လူနာမည် ထည့်ပြောရုံပါဘဲ)
နောက်ဆုံး တစ်ခုကတော့ email တို့ letter တို့မှာ နောက်ဆုံး စာအပိတ် အနေနဲ့ ထည့်ရေးရတဲ့ Many thanks ဆိုတာပါဘဲ။
ဒီလောက်ဆို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတွေ ပြောဖို့ တော်တော်လေး ပြည့်စုံသွားပြီပေါ့နော်။
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်လျှက် - Thanksamillion!
English withatwist မှ Shanti ရဲ့ English Skills: 13 ways of saying Thank You ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းဆောင်းပါးကို ဒီနေရာ (http://englishwithatwist.com/2014/05/08/english-skills-13-ways-of-s...) မှာ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
“ကြေးဇူးတငျပါတယျ” “ကြေးဇူးပွုပွီးတော့”ဆိုတဲ့ စကားတှကေ ဘာသာစကားတိုငျးမှာ ရှိပါတယျ။ ယဉျကြေး သိမျမှမှေု့ကို စကားအရာမှာလညျးဖျေါပွကွတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ နစေ့ဉျသုံး ပွောစကားတှမှော မပါ မပွီးသလောကျပါဘဲ။ အင်ျဂလိပျမှာလညျးဘဲ “Please” နှငျ့ “Thank you” တို့ဟာ မပါရငျ မပွီးတဲ့ အရေးကွီးစကား ၂ ခှနျး ဖွဈပါတယျ။ တဈကယျတော့ အင်ျဂလိပျစကားပွောရငျ ဒီနှဈခှနျးက တဈနရောရာမှာ အမွဲပါတာပါဘဲ။ Thanks တို့ Thank you တို့ ကတော့ တဈစုံတဈယောကျက ကိုယျ့အပျေါ ပွုမူ၊ လုပျကိုငျ၊ ပွောဆိုတာကို ကြေးဇူးတငျကွောငျးပွောခငျြရငျ သုံးတဲ့ common အဖွဈဆုံး နှဈခှနျးပါဘဲ။ Thank you ကိုတော့ ပိုပွီးယဉျကြေးတဲ့ ပုံစံနဲ့ ပွောတာဖွဈပါတယျ။ နောကျထပျ ကြေးဇူးတငျကွောငျးပွောတဲ့ စကားတှကေတော့
Thank you so much တို့ဖွဈပါတယျ။
ဒီအပျေါမှာ ပွောခဲ့တာတှကေိုတော့ ကြေးဇူးတငျကွောငျးကို ယဉျယဉျကြေးကြေးလေးနဲ့ ပွောတဲ့အခါ သုံးရပါတယျ။ ဥပမာလေးတှကေိုလညျးဖျေါပွလိုကျပါတယျ။
ခငျမငျတဲ့သူ အခငျြးခငျြးသုံးတဲ့ ကြေးဇူးတငျစကား တဈခှနျးလညျးရှိပါသေးတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ “Thanksabunch” ဖွဈပါတယျ။ ဒီစကားကို ငေါ့ပွောတဲ့ ပုံစံနဲ့လညျးသုံးလို့ရပါသေးတယျ။ ဆိုလိုတာက တဈယောကျယောကျရဲ့ လုပျရပျက အကူအညီမဖွဈတဲ့ အပွငျ အနှောကျအယှကျဖွဈသှားတဲ့အခါ စိတျတိုပွီး ငေါ့ပွောတာမြိုးကိုပွောတာပါ။ (Thanksalot နှငျ့ Thanks very much တို့ကိုလညျး ငေ့ါပွောတဲ့အခါ သုံးလို့ရပါတယျ။)
You told Tony what I told you in confidence? Thanksabunch! (ကိုယျကတိတျတဆိတျ ရငျဖှငျ့ထားတဲ့ ကိစ်စကို လူတကာလြှောကျပွောလို့ စိတျဆိုးပွီး "ကြေးဇူးဘဲဟေ"့ လို့ ငေါ့ပွောတာပေါ့)
Thanksalot for spoiling my evening. (ငါ့ ညနခေငျးလေး ဖကျြစီးပဈလိုကျလို့ ကြေးဇူးဘဲ လို့ငေါ့ပွောတာ)
ကောငျးဘှိုငျရုပျရှငျတှမှော အမြားဆုံးကွားရတဲ့ အရမျးယဉျယဉျကြေးကြေးလေးပွောတဲ့ ကြေးဇူးတငျတယျဆိုတဲ့ နောကျစကားတဈခှနျးကတော့ “much obliged” ပါဘဲ။ ဒီစကားက နစေ့ဉျသုံးတှထေဲမှာ ကွားရခဲပါတယျ။ အရမျးယဉျကြေးတဲ့ အသိုငျးအဝိုငျးတှမှော သုံးတာ ဖွဈပါတယျ။ တဈခြို့ရုပျရှငျတှမှော သတိထားနားထောငျကွညျ့ရငျ ကွားရတတျပါတယျ။
နောကျထပျ ခပျမိုကျမိုကျလေး ကြေးဇူးတငျကွောငျး Thank you နဲ့ တှဲပွောလို့ ရတဲ့ စကားတှကေတော့
I owe you one နှငျ့
I owe you big time တို့ဖွဈပါတယျ။
အဓိကအားဖွငျ့ ကိုယျက အခကျအခဲတှနေ့ခြေိနျမှာ တဈစုံတဈယောကျက ကူညီတယျဆိုရငျ အထကျပါ စကားတှကေို thank you အပွငျ ထပျပေါငျးပွီး ကြေးဇူးတငျကွောငျးပွောလို့ရပါတယျ။ ခငျမငျတဲ့ ပုံစံနဲ့ပေါ့။
Thanks for giving mealift to the station. You saved my life. (ဘူတာရုံကို ကားကွုံလိုကျပို့လို့ ကြေးဇူးဘဲနျော။ ခငျဗြားကယျပလေို့ဘဲ။)
Thanks for the advice. I owe you one. (အကွံပေးတာကြေးဇူးဘဲဟေ့။ ခငျဗြားကိုတော့ အကွှေးတငျသှားပွီ။)
Thanks for helping me out with the essay. I owe you big time. (စာဝိုငျးလုပျပေးတာကြေးဇူးဘဲ။ ပွနျကူညီဖို့ အကွှေးမှတျထားပါ့မယျ။)
နောကျတဈမြိုးကတော့ ဗွိတိသြှအင်ျဂလိပျမှာ သုံးတဲ့ ကြေးဇူးတငျစကား “Cheers” ပါ။ တဈခြို့က စာအရေးအသားတှမှော thank you အစားမှားယှငျးသုံးစှဲကွပါတယျ။ "Cheers" က အပွောမှာဘဲ သုံးလို့ရတယျ။ လူတျောတျောမြားမြားက သိပျကွားဖူးကွမှာ မဟုတျလောကျဖူး။
တဈစုံတဈယောကျက ကိုယျ့ကိုလကျဆောငျပေးတယျ (အထူးသဖွငျ့ တနျဖိုးကွီးလကျဆောငျ) ဆိုရငျ ပွီးတော့ ကိုယျက အရမျးအံ့သွသှားတယျဆိုရငျ ပွောတာကတော့ “You shouldn’t (have)” တဲ့။
Oh, Martin, what lovely flowers. You shouldn’t have! (အိုးမဟုတျတာဘဲ)
ယဉျယဉျကြေးကြေးနဲ့ ကြေးဇူးတငျကွောငျးပွောတဲ့နောကျတဈမြိုးကတော့ “You are too kind” ပါဘဲ။ ဒါကတော့ တဈကယျ ကြေးဇူးတငျကွောငျးပွောတာရော၊ စိတျထဲကမပါဘဲ ကြေးဇူးတငျကွောငျး ပွောတာပါ နှဈမြိုးစလုံးမှာသုံးတယျ။ (ပွောသူနဲ့ ပွောတဲ့ အခွအေနပေျေါ မူတညျပါတယျ။)
နောကျတဈမြိုးကတော့ စငျမွငျ့ပျေါမှာ၊ ပရိဿတျအရှမှေ့ာ ပွောတဲ့ ကြေးဇူးတငျ ပွောစကားပါ။ (ဥပမာ - ဆုပေးပှဲလိုဟာမြိုးမှာ) အဲ့ဒါကတော့ “I’d like to thank…” ပါ။
I’d like to thank everyone for coming along and supporting us today. (I'd like to thank..အနောကျမှာ ကြေးဇူးတငျထိုကျတဲ့ လူနာမညျ ထညျ့ပွောရုံပါဘဲ)
နောကျဆုံး တဈခုကတော့ email တို့ letter တို့မှာ နောကျဆုံး စာအပိတျ အနနေဲ့ ထညျ့ရေးရတဲ့ Many thanks ဆိုတာပါဘဲ။
ဒီလောကျဆို ကြေးဇူးတငျကွောငျးတှေ ပွောဖို့ တျောတျောလေး ပွညျ့စုံသှားပွီပေါ့နျော။
အားလုံးကိုကြေးဇူးတငျလြှကျ - Thanksamillion!
English withatwist မှ Shanti ရဲ့ English Skills: 13 ways of saying Thank You ကို ကိုးကားဘာသာပွနျထားခွငျး ဖွဈပါတယျ။
မူရငျးဆောငျးပါးကို ဒီနရော (http://englishwithatwist.com/2014/05/08/english-skills-13-ways-of-s...) မှာ သှားရောကျဖတျရှုနိုငျပါတယျ။
Permalink Reply by ko kyawswar on February 23, 2015 at 10:30
Permalink Reply by Khoon Hset Nay on February 23, 2015 at 11:11
Permalink Reply by May Thu Htet on February 23, 2015 at 13:20
Permalink Reply by Ma Zin Wai Htike on February 23, 2015 at 14:39
Permalink Reply by wityeelay on February 24, 2015 at 8:53
Permalink Reply by hnin wut yee on February 24, 2015 at 10:10
Permalink Reply by Htun Htun Soe on February 25, 2015 at 14:25
Permalink Reply by thinthandarei on February 25, 2015 at 15:56
Permalink Reply by Shwe Moe Nyo on February 26, 2015 at 20:57
very! very thanks.
Permalink Reply by Thaw Thaw on February 27, 2015 at 8:46
Permalink Reply by khaing lay on March 1, 2015 at 18:49
I like it .Thank youalot.
Permalink Reply by Yamin Khin Kyaw Shwe Win on April 7, 2016 at 12:54